लालजोडी कमरेडको यो कस्तो वियोगान्त ?
नेपालमा यतिबेला दुईथरि नेकपा चर्चामा छन् । एउटा सत्तारुढ नेकपा छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् र जहाँ प्रचण्ड पनि अध्यक्ष छन् । अर्को नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ।
तर कुनै ‘प्याटेन्ट राईट’ नभएपनि विप्लव समूहले नै आफूलाई सबैभन्दा पहिला नेकपाको दर्जा दिएको थियो । आफूलाई ‘नेकपा हौं’ भनेर तिनले कार्यक्रम र आन्दोलन अगाडि बढाए । आधिकारिकताको कुरा गर्ने हो भने त ऋषि कट्टेलहरूको नेकपा नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो ।
हालसालैको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लुट्ने, बम पड्काउने, जनता तर्साउनेहरूले आफूलाई नेकपा भनिदिँदा साँचो अर्थको आफ्नो नेकपालाई मर्का परेको बताएका थिए । ‘नेकपाको नाममा भइरहेका लूटका गतिविधिले आफूलाई पनि नेकपाभन्दा लाज लागिरहेको छ,’ सीके राउतसँगको सहमति सार्वजनिक गर्ने क्रममा ओलीले भनेका थिए ।
हिजो साँझदेखि ओली मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । त्यो हो – विप्लव समूहको नेकपाको कार्यक्रमलाई बन्देज लगाउने निर्णय । विश्वमा यस्ता घटना कमै हुन्छन्, जो एउटै नाम गरेका, विचारसँग निकट रहेका पार्टीहरू मिल्दैनन् र ती प्रतिबन्धको हदसम्म पुग्छन् । यो रोचक भएको छ र यो रोचकताको हल समयमै हुन सकेन भने कालान्तरमा भयंकर सन्नाटाको रुपमा उपस्थित हुने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विगतमा माओवादी लिगेसीसँग सकारात्मक थिएनन् । कुनै बेला ओलीले प्रचण्डलाई खेद्नसम्म खेदे । नेपालमा तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १२ वर्षे सशस्त्र संघर्षको सबैभन्दा आलोचक कोही थिए भने ती ओली नै थिए । झापा विद्रोहको लिगेसी बोकेका नेता, लामो समयसम्म जेलको सजाय काटेका नेता ओली किन अहिंसात्मक आन्दोलनका पारखी हुन पुगे ? त्यो भने रहश्यको विषय भएको छ । तर राजनीतिमा एउटा मिथक के हुन्छ भने जहाँ दमन र अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ विरोध हुन्छ, प्रतिकार हुन्छ र त्यसले विद्रोहको रुप लिन्छ ।
अहिलेको अवस्था के हो भने तत्कालीन युद्धमा सहभागीहरू नै नेकपाको महत्त्वपूर्ण पद सम्हालेर बसेका छन् । सरकार सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । जस्तो कि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ एक पात्र हुन् । बादलले हिजो युद्ध पनि लडे । सैनिकका ब्यारेक र प्रहरीका चौकीमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए र अहिले बादलले देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएर शासन सत्तामा विराजमान छन् । गणतन्त्रका लागि हिजो सँगै लडेको हितैसी मित्रलाई आज पक्राउ गर्ने धुनमा छन् । त्यसलाई जहाँ भेटेपनि नछाड्नु भन्ने आदेश दिएका छन् ।
तपाई सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोेस्, मिडिया हेर्नुहोस्, बाहुल्य जनता सरकारी निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् ।
पक्कै पनि देशमा शान्ति, अमनचयन हुनुपर्छ । यो कुरामा दुईमत छैन । राजनीति शान्तिको मार्गमा हुनुपर्छ, यो कुरामा पनि दुईमत छैन । तर कुनै पनि देशमा उत्पन्न अस्थिरताको हल गर्न राज्य खासगरी शासक तत्वले के कस्तो प्रयास गर्‍यो त ? त्यो मुख्य रहन्छ । विखण्डनको नारा बोकेर मधेशमा कार्यक्रम चलाइरहेका सीके राउतसँग राष्ट्रिय सभा हलमा कुम जोडिएको छ भने विप्लव समूहसँग एकपटक पनि वार्ताको अपिल अथवा प्रयास नगरेर उनको पार्टीलाई बन्देज लगाउने अराजनीतिक काम भएको छ ।
पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम संविधान विपरीत पनि छ । यसो भन्दै गर्दा बम पड्काउन, मान्छे मार्न कसैलाई छुट छैन । तर हामीले चिजहरूलाई सोलोडोलोभन्दा पनि गहिरिएर बुझ्नुपर्छ । विप्लव जसले यो देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि आफूलाई बलिदानीमा होमे । शान्ति प्रक्रियामा आए । तर राजनीतिक रुपमा केही फरक मत राखे । केही मार्क्सवादी मागहरू राखे । तर उनका मागहरू उपर कहीँकतै शीर्ष तहमा छलफल भएको देखिएन । उनको राजनीतिक मागलाई गम्भीर रुपमा लिइएको देखिएन ।
बरु कसरी हुन्छ विप्लव समूहलाई भड्काउने प्रयास गरियो । लुटेरा भन्ने, डाँका भन्ने । यो गलत थियो । विप्लव समूहको माग के हो त ? के के चिजमा सहमति गर्न सकिन्छ त ? त्योतर्फ ध्यान कसैले दिएनन् । बरु कार्यकर्ता धडपकड गर्ने, झूटा मुद्दा लगाइदिने काम भयो । प्रकाण्ड एक उदाहरण हुन् । प्रकाण्डलाई देशभरिकै अदालतमा घुमाइयो । कैयौ मुद्दामा फसाउने प्रयास भयो । तर सम्मानित अदालतले राज्यको षड्यन्त्रलाई सफल हुन दिएन ।
अहिले कुनै पार्टी प्रतिबन्धमा पर्न र कुनै पार्टी कारवाही फुकुवामा पर्न देशमा निरंकुश शासन छ र ? पञ्चायत छ र ? जहाँनिया राणाशासन छ र ? राजतन्त्रको अवशेष छ र ? तर शासकले आफ्नो होस गुमाएको प्रतित हुन्छ । यो कुनै विप्लव समूहप्रतिको सदासयता होइन, यो त देशमा शान्ति अमनचयन देख्न चाहनेको भावना मात्र हो । तपाई सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोेस्, मिडिया हेर्नुहोस्, बाहुल्य जनता सरकारी निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् ।
विप्लव समूहले केही बमकाण्ड गराएको थियो र उसले जिम्मा पनि लिएको थियो । त्यो उसको राजनितीक कार्ययोजना होला, भलै यो ठीक होइन । तर राज्यले समस्या समधानको लागि यो बीचमा के कस्ता पहलकदमी चाल्यो त भन्दा केही पनि चालेन । खाली भड्काउबाजी भाषण मात्र दिइरहे । प्रधानमन्त्री हुन् वा गृहमन्त्री दुवैले विप्लव समूहको रगत उम्लिने गरी विरोध र धडपकड गरे ।
विप्लव समूह एउटा हैसियत बोकेको समूह हो । उनीहरूसँग हतियारको जोहो पनि राम्रै छ । खासगरी उनीहरूसँग हिजोका अयोग्य भनिएका तत्कालीन माओवादी सेनाका लडाकुहरू गोलबन्द छन् । उनीहरूमा एक किसिमको आक्रोशको भाव जागृत भएको छ । ती तालिम प्राप्त छन् । अब उनीहरूलाई राज्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । सलाईको काँटीलाई खरबारीमा फाल्यो भने के हुन्छ ? पक्कै पनि आगो लाग्छ । चिजहरू खरानी हुन्छन् ।
लालजोडीलाई जहाँ भेट्यो त्यही समात्न आदेश दिने यो कस्तो वियोगान्त परिस्थिति हो ? यो कस्तो भावशून्य समय हो ?
रोचक कुरा त के छ भने परिस्थितिले जन्माएको यो ‘लालजोडी’ बादल र विप्लव परिस्थितिकै कारण आज एकआपसमा भिड्ने तरखरमा छन्, आमनेसामने छन् । युद्ध तोपका मालिकहरू डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोन उन ‘फेस टू फेस’ वार्तामा बस्न सक्छन् भने हिजो एउटै थालमा गुन्द्रुक र आटोढिडो खाएर गणतन्त्रका लागि लडेकाहरू आज किन कुकुरबिरालो जस्तो गरेका होलान् ? बडो दुःख लाग्छ ।
केही महिना अगाडि विप्लवसँग यो पक्तिकारले भेट्ने मौका पाएको थियो । विप्लवको गुनासो थियो, ‘शुरूमा बादल दाई आउनुभयो, फेरि जानुभयो, अहिले त शासक हुनुभयो ।’ तत्कालीन माओवादी पार्टी फुट्ने बेलामा बादल र विप्लव सँगै थिए । उनीहरू सँगै हुँदाको एउटा तस्विर हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । जंगलको उकालो यात्रामा बादल थकित देखिन्छन् । उनी निराश मुद्रामा भुइँमा बसेका छन् । विप्लव उभिएका, मुस्कुराइरहेका देखिन्छन् ।
के बादल थाकेकै हुन् त ? यसै भन्न सकिन्न । तर गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले वार्ताभन्दा पनि पेलेरै जाने जो नीति बनाए, त्यो राम्रो गरेनन् । लालजोडीलाई जहाँ भेट्यो त्यही समात्न आदेश दिने यो कस्तो वियोगान्त परिस्थिति हो ? यो कस्तो भावशून्य समय हो ? बरु गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भए उनको इतिहासमा बादलजस्तै कालो धब्बा लाग्ने थिएन होला ।
हिजो आफूले गरेको युद्ध ठीक आज आफ्नै सहयात्रीले उठाएको विद्रोहको श्वर कसरी बेठीक होला र ? देश द्वन्द्वमा गए जनताकै छोराछोरीको रगत बग्ने हो । आग्रह पूर्वाग्रह छाडेर वार्तामा बस्दा के बिग्रिन्छ र ? वार्ताका लागि विप्लव समूह पनि तयार हुनैपर्छ । अझैपनि केही बिग्रेको छैन । आ–आफ्नो अहंकार र दम्भ त्यागेर देशलाई शान्तिको श्वास फेर्न दिउँ ।